Shan askari oo Kenyan ah oo lugu diley weerar ay al-Shabaab ka fuliyeen gobolka xeebta ah ee Lamu | RBC Radio
Shan askari oo Kenyan ah oo lugu diley weerar ay al-Shabaab ka fuliyeen gobolka xeebta ah ee Lamu	Posted on July 15, 2017
Muqdisho (RBC Radio) Ururka al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada weerar ka dhacay gobolka xeebta ku yaalla Lamu ee dalka Kenya,sida ay baahisay warbaahinta afka ururka ku hadasha.
Dagaal-yahanno kooxda daacad u ah ayaa weerarka gobolka ka dhacay ku qaaday kolonyo ay la socdeen ciidamo Kenyan ah oo marayay inta u dhaxeysa Lamu iyo deegaanka Mpeketoni.
Weerarka al-Shabaab waxaa ay sheegeen inay ku dileen ilaa shan askari oo Kenyna ah oo la socday gaari ay gubeen,waxaa kalo ay sheegeen inay la wareegeen labo gaari oo kale.
Dhinaca kale,inta uu weerarka socday waxaa la sheegay al-Shabaab inay afduubeen haweeney mas’uul aheyd, iyadoo ciidamada Kenya ay howl gal ka bilaabeen Keymaha Boni oo la sheego in Al-Shabaab ku dhuumaaleysanayaan.
Al-Shabaab ayaa u muuqata toddobadyadii ugu dambeeyay inay siyaadiyeen weerarrada ay ka geysanayaan gobolka xeebta ku yaalla,sidoo kale dowladda Kenya ilaa hadda kama aysan hadlin weerarka ay guusha ka sheegteen al-Shabaab.